'UMSINDISI' KAJEFF PROBST WEENTETHO ZEXESHA LAMA-50 KUNYE NOKUBONISA KWAKHONA - IINDABA
'Osindileyo' uJeff Probst uthetha ngeXesha lama-50 kunye noBonisa ukuzalwa kwakhona
Umsindisi wexesha elide uJeff Probst uye waxakeka kwangaphambili malunga nokwenza yonke indlela ngendlela eya kumaxesha angama-50, kodwa ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi ngumhla emva kokuba Abaphumeleleyo eMfazweni bevuselele umgcini ophumelele i-Emmy. Ucebise ngezinto ezahlukeneyo kudliwanondlebe lwangoSeptemba 2021 ukuba ucinga ukuba baqala ixesha elitsha kraca loMsindisi kunye nexesha le-41 kwaye ngokuqinisekileyo ubona umboniso oya kumaxesha angama-50.
Iifowuni zeProbst zoQinisekisa 'Isipho esingalindelwanga' Ukuvuselela umboniso kwakhona
Kudliwanondlebe lwakhe lwamva nje, uProbst wakhankanya ukuba kwiminyaka eqhelekileyo, ishedyuli phakathi kwamaxesha oMsindisi ayipheli, ngenxa yoko alikho ixesha elininzi ngaphandle koxinzelelo lwewotshi enokuthi, 'Makhe ndithulule enye Ikomityi yeespresso kwaye jonga oku kwakhona. '
mingaphi imike fox
Kodwa ngokuvalelwa yedwa, uProbst wakhankanya ukuba wafumana isipho esimangalisayo sokukwazi ukuqaphela ngononophelo umboniso kuba uhlasela ishumi leminyaka lokuba semoyeni kwaye ubonakala ngathi inokuba kukuzalwa ngokutsha ngokulandelelana.
Okwangoku ngoku, indawo 'uMsindileyo' ekufuneka ahambe ngayo inobuso bamva nje, amazwi amva nje, abadlali beqela lesibini, abadlali abanokusivumela ukuba sibabukele kwaye sifunde, kukhankanyiwe uProbst, kubandakanya, ndiyabona ixesha le-50 lokuqiniseka . Sele ndiyibona indawo oza kuhamba kuyo kwiminyaka emi-5 elandelayo. Khange siyibeke, nangona kunjalo ipanorama ikhona.
Intloko ye-CBS Yathi abantu babukele 'uMsindisi' kulo lonke ixesha lokuvalelwa
UKelly Kahl, umongameli we-CBS, ucebise iintlobo ngeentlobo ukuba wonke umntu ngenxa yokutshixa, abantu bebebukele uMsindisi kwiParamount Plus, inkonzo ye-CBS yokuma yodwa-inyani kukuba, abantu abadumileyo abangakhange babukele uMsindisi waqala wangena kuyo yonke uvalelo.
Umboniso ulungelelwano oluphezulu kwezintathu, kwanaxa singenazo iziqendu ezizodwa kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo. Abantu bebebukela kwakhona okanye befumanisa lo mboniso, ukhankanye uKahl, otyala i-Probst ngokugcina uMsindisi kutshanje yonke le minyaka ingama-20 + ibisemoyeni.
mdala kangakanani badkid bam
Zininzi izinto ezitshisayo ezahlukileyo ezityhilekileyo eziye zafika zadlula kangangokuba andiboni nayiphi na indlela oya kuthi ube nakho ukugxeka uJeff okanye nabaphi na abavelisi ngokufuna ukunceda umboniso uziva ngenene kwaye ungowangoku, ukhankanyile uKahl. Kuchanekile ukuphuma kwaye ngokulula uthi, ‘Heyi, siza kwenza umboniso ofanayo- akukho mfuneko yokuba kusungulwe.’ Kwaye umboniso ubunokufumana kancinci.
U-Probst wongeze ukuba usandula ukwamkela izigaba ezi-5 zeXesha lokuSinda kwaye ibingumtshintshi ogqibeleleyo womdlalo-ndiziva ngathi siyityhile ifomathi yethu, kwaye intsha kraca, uProbst okhankanyiweyo.
Kwaye i-CBS iyavuya ukuwamkela okokugqibela umboniso kwakhona kumoya-kwaye ke banethemba lokuba abalandeli bayavuya njengoko kufanelekile.
Siyathemba ukuba ukungabikho kwenza iziko liphuhle, utshilo uKahl. Sikwazile ukudibanisa ngokudibeneyo ixesha elinenzuzo lokugqibela kwiinyanga ezili-12 kunye nokutyhilwa okunenzuzo [kwi-CBS], kodwa ngokuqinisekileyo bekuvakala ngathi isiqaqa sethu besiswele 'uMsindisi.'
Abasindileyo babuyela kwixesha labo lamashumi amane lokuqala ngoLwesithathu, nge-22 kaSeptemba ngo-8 ebusuku. Amaxesha aseMpuma nasePacific kwi-CBS. Ixesha leshumi elinambini lesibini liza kubakho ngaphakathi kwentwasahlobo ka-2022. Amaxesha ama-43 kunye nama-44 ayaphosa ngoku, ke xa kunokwenzeka unqwenele ukusebenzisa ngawo onke amaxesha, ngoku ungangabakho amathuba!
BUKELA: 'Ilizwi' iBest Brittany Bree ifumana ukuHamba kwesihlalo esi-4
Izitulo ezine zokujika zezona zininzi iimbeko eziphezulu zomntu okhuphisana naye kwi-NBC's 'Ilizwi' anokulifumana kuVavanyo lwaBangaboni kuba oko kuthetha ukuba
'I-Umbrella Academy': Izizathu ze-8 zokubukela umboniso bhanyabhanya weNetflix
Ixesha eliQinisekisiweyo lesi-1 Isiqendu sesi-2 soPhononongo: Ice Pick
UNeil Patrick Harris Unendima Encinci 'KwiMatrix 4,' Kodwa Uyenza Kakhulu
Uthotho lukaKate McKinnon 'lukaJoe Exotic' lomoya kwi-NBC, Peacock nakwiNethiwekhi yase-USA
Umvukeli uWilson Ngaba zii-17 Lbs ezikude neenjongo zakhe zoBunzima: Kukuphi ukutya ekukuphephayo
UTori Gwinn wamkela umntwana oyinkwenkwe: 'Eyona nto imnandi kakhulu kuVuyo'
‘RHONY’ Inkwenkwezi uLeah McSweeney utyhila ukuba wafumana izinto zokufakwa ebeleni
UTina Fey, Amy Poehler skewer iqela emva komsitho
U-Chaka Khan wayenguMlingane wam oDanisa kakhulu
'Ugqirha Strange 2' icebo elitsha lokuvuza kwi 'umphindezeli oya kwi-rouge' ekhokelela kwidabi le-epic
ULisa Cadette Detwiller I-Biography, Ubudala, i-Net Worth, ubude, i-Wiki
uqikelelo lwevoti yaseMelika
imikhonto ka-britney kunye nokuphuza kuka-madona
ixabiso elinobunzima obunzima
cj lipholile ixabiso lendlu
umhlwa umhlana ibali lokwenyani
Ixabiso le-tyler carter ngexabiso